Ahoana ny famelana heloka ny olona iray araka ny baibolim ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ahoana ny famelana heloka ny olona iray araka ny Baiboly. Efa naheno ilay fitenenana hoe "Mamela heloka aho fa tsy manadino"? Ny marina dia, na dia be mpampiasa aza dia tsy marina izany. Ny famelana heloka dia ny fanadinoana ireo fahasimbana nateraky ny olon-kafa taminao. Noho izany, ny fomba tokana mamela heloka ny olona iray dia ny fanadinoana tanteraka ny hadisoany.
El zanak'olombelona dia biby manana instinc velona Miteraka ampinga fiarovana amin'ny zavatra rehetra izay mahatonga anao hijaly. Izany no antony, sarotra be amintsika ny mamela heloka ny fahavoazana ataon'izy ireo amintsika. Na izany aza, ilaina izany Andao hianatra ny hamela ny heloky ny hafa. Tsy afaka miaina eo ambanin'ny ziogan'ny fihetsem-po manimba toy ny hatezerana, valifaty na fanomezan-tsiny isika. Ny mianatra mamela heloka dia asa sarotra rehefa tena be ny fahavoazana. Na izany aza, io ihany no làlana mankany milamina amin'ny tenanao.
Ho an'ny Kristiana tsirairay, ny famelan-keloka dia a singa manan-danja hahatratrarana ny Famonjenanoho izany dia zava-dehibe izany mianatra mamelà heloka tanteraka. Ho an'ity, ny Baiboly asehony antsika ny lalana tokony haleha.
1 Ahoana ny famelana heloka ny olona iray arakaraka ny baiboly tsikelikely
1.1 1. Atreho ny olana
1.2 2. Ekeo ny fahatsapanao
1.3 3. Ambarao ny famelan-keloka
1.4 4. Miala amin'ny ota
2 Impiry aho no tsy maintsy mamela heloka?
Ahoana ny famelana heloka ny olona iray arakaraka ny baiboly tsikelikely
Azonao atao mamela heloka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazofijaliana Jesosy dia nandoa ny vidin'ny ota rehetra. Hanampy anao hanafaka ny tenanao amin'ny lolompo sy ny faniriana valifaty izany., manokatra ny lalan'ny famelan-keloka. Ny famelana heloka dia tsy fahatsapana tsy voafehinao. Mamelà ny fanapahan-kevitra raisinao izany, ary misy vokany eo amin'ny fahatsapanao izany avy eo.
Mba hahatratrarana an'io dia mamporisika anao izahay hanaraka ireo dingana ireo. Tadidio fa asa sarotra izany, saingy miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra dia misy zavatra azo atao.
1. Atreho ny olana
Misy zavatra kely azontsika odian-tsy hita, satria tsy olana izany. Fa misy zavatra tsy mety tsy azontsika odian-tsy hita. Tsy manampy ny mody tsy misy olanaVao mainka hiharatsy izany amin'ny farany. Ianao dia tokony ekeo fa misy ny olana ary manapaha hevitra hamaha azy miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra.
2. Ekeo ny fahatsapanao
Ara-dalàna raha tezitra, kivy, malahelo, maratra rehefa misy manota aminao. Ny mody tsy mahatsapa na inona na inona ianao, izay tsara, dia lesoka. Lazao amin'Andriamanitra izay tsapanao. Andriamanitra dia mahatakatra.
Rehefa mandeha ny fotoana dia tokony hiala ny fanaintainana. Raha tsy izany no izy, Angataho Andriamanitra hanampy anao tsy hianjera amin'ireo fahatsapana ireo. Zava-dehibe izany mianatra mifehy ny fahatsapana amin'ny fomba mahasalama.
Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa sasatra sy mavesatra entana, fa homeko fitsaharana ianareo. Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po aho; ary hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo; Fa mora ho an'ny ziogako, ary maivana ny entako.
Matio 11: 28-30
3. Ambarao ny famelan-keloka
Manapa-kevitra ny hamela ny heloky ny olona nandratra anao. Miezaha hahatakatra fa efa nandoa ny vidin'ny fahotan'io olona io Jesosy, ary koa ny anao. Ny famelana heloka dia tsy milaza fa marina ny zavatra nataon'io olona io. Ny famelan-keloka dia miaina tsy mamela ny vokatry ny ota hanimba anao.
Mifanampy, ary mifamela heloka raha misy manana fitarainana amin'ny hafa. Tahaka ny namelan'i Kristy ny helokareo dia ianao koa.
Kolosiana 3: 13
Lazao amin'andriamanitra fa mamela ny helok'ity olona ity ianao. Lazao amin'io olona io ny fahotana navelanao heloka. Manapa-kevitra ny hiala amin'ny lolom-po. Omeo an’Andriamanitra ny zava-drehetra, avelao izy hikarakara ilay olon-kafa. Raha tonga hangataka famelan-keloka ilay olona dia lazao azy ireo fa mamela azy ianao.
4. Miala amin'ny ota
Rehefa misy manota amintsika, dia mora ny mamaly amin'ny fahotana ihany koa. Raha nanota ianao dia mangataha famelan-keloka amin'Andriamanitra amin'ny fihetsikao ary mangataha fanampiana aminy mba tsy hanaovany zavatra mitovy amin'ny manaraka. Mitadiava fomba hanehoana ny fahatsapanao amin'ny fomba masina. Tsy ny fahatsapana no olana, fa ny ataontsika amin'izy ireo no mety ho ratsy.
Tezera, fa aza manota; aza manao el sol momba ny fahatezeranao.
Matetika, rehefa misy mandratra antsika, dia mamela marika (fahaketrahana, fiheveran-diso momba ny tena, tahotra…). Angataho Andriamanitra hanasitrana ny ratrao. Raha irinao dia hamerina anao ny fahamarinany. Aza avela handresy ny ota.
Impiry aho no tsy maintsy mamela heloka?
Impiry aho no tsy maintsy mamela heloka
Nilaza i Jesosy fa tsy maintsy mamela heloka imbetsaka isika. Tsy tokony hotadidintsika ny isan'ny fotoana mamela antsika. Tsarovy fa Andriamanitra dia namela anao ny fahotanao rehetra. Ary noho izany koa Tsy maintsy mamela ny heloky ny hafa ianao, na dia tsy mangataka famelana aza izy ireo.
Dia nankeo aminy i Piera ka nanao hoe: Tompoko, impiry no havelako ny heloky ny rahalahiko noho ny nanotany tamiko? Hatramin'ny fito? Hoy Jesosy taminy: Tsy lazaiko aminao hatramin'ny fito, fa hatramin'ny impito amby fito-polo.
Matio 18: 21-22
Ny famelana heloka fotsiny dia tsy midika hoe mendrika itokisana ianao. Tsy maintsy sitrana tsikelikely izany. Ary tsy midika foana izany hoe miverina amin'ny fifandraisana toa ny taloha. Misy tranga izay tsara indrindra ny manalavitra an'io olona io, na dia namela azy ireo aza ianao, dia mety mila manao izany ianao noho ny fiarovana anao sy ny ainao.
Izany no izy! Manantena izahay fa hanampy anao hahatakatra ity lahatsoratra ity ahoana ny famelana heloka ny olona iray araka ny Baiboly. Raha izao dia te hahalala ianao ny fomba hahatratrarana ny famonjena araky ny Baiboly, manohy mizaha Discover.online.